Inqwelomoya yaseRussia yantlitha intaba eTurkey ibulala wonke umntu owayekhwele
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTurkey zokuPhula » Inqwelomoya yaseRussia yantlitha intaba eTurkey ibulala wonke umntu owayekhwele
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelomoya ezininzi zokulwa umlilo zithunyelwe eTurkey yiRussia ukuyokunceda isizwe kumzabalazo waso nomlilo wasendle, osele ubhuqekile kule veki iphelileyo.
Inqwelo moya yaseRussia icimile eTurkey namhlanje.
Inqwelomoya ayikhange ikwazi ukuphakama emva kokulahla amanzi emlilweni.
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho lwazi malunga nonobangela wengozi osele uvele.
Inqwelomoya yokucima umlilo i-Beriev Be-200 yase-Russia yaphosa intaba kwindawo esemazantsi eTurkey eMarash ngoMgqibelo.
Wonke umntu okhwele emanzini Yiba-200 Iinqwelomoya- abaqhubi beenqwelo moya baseRussia kunye namagosa aseTurkey - babulewe.
NgokwaseRussia Icandelo loMphathiswa Wezomkhosi, kwakukho abasebenzi baseRashiya abahlanu kunye namagosa amathathu aseTurkey ababekhwele kwinqwelomoya.
Inqwelomoya yengozi emva nje kokukhulula amanzi kolunye ubushushu Imililo yasendle yaseTurkey. Inqwelomoya ayikhange ikwazi ukufumana ukuphakama ngokwaneleyo emva kokulahla umthwalo wayo, yaza yaya kuphazamiseka entabeni.
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho lwazi malunga nonobangela wengozi ethe yavela. Umkhosi waseRussia sele uthumele iqela labaphandi eTurkey ukuba lihlole indawo yengozi leyo.
Kuthunyelwe iqaqobana leenqwelomoya zokulwa umlilo ikarikuni yiRussia ukunceda isizwe kumzabalazo waso zendle, esele ziyikhathaze kwezi veki zidlulileyo. Ngokwengxelo zamajelo eendaba, iBe-200 eyonakalisiweyo yayiqhotyoshelwe kwisebe lokucima umlilo eAdana.